जेबिल्स फाइनान्सको संस्थापक शेयर दोस्रो पटक लिलामीमा | गृहपृष्ठ
Home लगानी जेबिल्स फाइनान्सको संस्थापक शेयर दोस्रो पटक लिलामीमा
on: March 12, 2019 लगानी
फागुन २८, काठमाडौं (अस) । जेबिल्स फाइनान्सले अवितरित संस्थापक हकप्रद शेयर दोस्रो पटक लिलामीमा विक्री गर्ने भएको छ । कम्पनीले ३ लाख ४० हजार ९५५ दशमलव ५० कित्ता संस्थापक शेयर चैत ५ गतेदेखि विक्रीमा ल्याउने भएको हो । यसअघि पहिलो पटक पुस १० देखि १७ गतेसम्म लिलामीमा विक्री खुला गर्दा बाँकी रहेको उक्त शेयर दोस्रो पटक विक्री गर्न लागेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
प्रतिकित्ता न्यूनतम रू. १०० सय मूल्य तोकिएको जेबिल्सको संस्थापक शेयर खरीद गर्न चाहानेले सोभन्दा बढी मूल्य अंकित गरी गोप्य शिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्नु पर्नेछ । चैत १३ गते अपरान्ह ३ बजेसम्म गोप्य शिलबन्दी पेश गर्नु पर्नेछ ।
शेयरमा न्यूनतम एक हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ भने अधिकतमको लागि कुनै सीमा तोकिएको छैन ।
यो हकप्रद शेयर विक्री प्रबन्धमा सनराइज क्यापिटल रहेको छ । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकसँग गाभिन लागेको जेबिल्स फाइनान्सले आर्थिक वर्ष २०७३/७३ को मुनाफाबाट ३.५७ प्रतिशत बोनस शेयर र ०.१९ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा जेबिल्सले रू. ९० लाख ६८ हजार खुद नाफा आर्जन गरेको छ ।